घर मालिकले बाढीकाे पानीले घडीयाल गाेही घरमा बगाएर ल्याएकाे पाएपछि !!!! के गर्ने ???? | Khabar Dainik
शक्तिमा हुनेहरूले आफुखुसी नियम कानुन बनाउने र तिनीहरूलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने चलन...
-थाेमस बाेगटी – संसारभरी सरकारहरु, सञ्चार माध्यम, बिज्ञापन, व्यापार अनि विभिन्न धार्मिक र...
संसारभरी एड्स संक्रमन हुने तीन मुख्य कारण छ ः १. असुरक्षित याैन सम्पर्क २. ड्रगकाे खाेप लाउने ३....
विवाहकाे विषयमा धेरै विचलित गराउने सत्यताहरू छन् । मेराे लागि सबैभन्दा विचलित गराउने कुरा चाहि...
तपार्इं दिउँसाे सपना देख्ने हुनुहुन्छ कि साहसी सपना देख्नेहुनुहुन्छ ? म याे प्रश्न हल्कारूपले...
घर मालिकले बाढीकाे पानीले घडीयाल गाेही घरमा...
घर मालिकले बाढीकाे पानीले घडीयाल गाेही घरमा बगाएर ल्याएकाे पाएपछि !!!! के गर्ने ????
वर्तमान परिपेक्षमा हेर्ने हाे भने नेपालमा मात्र हाेर्इन तर भारत, बङलादेश, पाकिस्तान र अमेरिकामा बाढी अाएर धेरै धनजन र ज्यान गुमेकाे छ । तर सबै भन्दा अचम्मकाे घटना के घटिरहेकाे छ भने काेही बाढीपिडितले अाफ्नाे घरमा यस्ताे संकष्टकाे समयमा बाढीले बगाएर ल्याएकाे जङगली पशुहरूकाे सामना गर्न परिरहेकाे छ ।
हिजाे भरखरमात्रकाे कुरा हाे, अमेरिकाकाे टेक्सासकाे हुस्टनमा हार्वे तुफानकाे कारण भएकाे बाढीले एकजनाकाे घर यस्तै विशाल र खतरनाक १० फुट जन्तुलार्इ बगाएर ल्यार्इदिएकाे रहेछ । घर मालिक ब्रायन फाेस्टरले उनकाे घर बाढीले खत्तम पारिदिएकाे पाए तर घरकाे अरू अवस्था कस्ताे छ भनेर खाेजेर हिँडदै गरी हेर्दा उनी अाफ्नाे नास्ता गर्ने काेठामा पुगे । काेठाभित्र छिरेर तल के हेरेका मात्र थिए, उनकाे त्रासकाे कुनै सिमानै रहेन जब उनले नास्ता गर्ने टेबुलमुनि १० फुट घडीयाल गाेहीलार्इ काेठामा शरण लिएकाे पाए ।
फाेस्टर र उनले सहयाेगकाे लागी बाेलाएकाहरूले केहि घण्टा गाेहीलार्इ समातेर बाहिर ल्याउने प्रयास गरे । त्यसपछि, वाइल्डरनेक्स वाइल्डलाइफ कन्ट्राेल र स्थानिय कानुन संम्पादनकाे अधिकृतहरू अाए अनि त्यस खतरनाक गाेहीसँग कुस्ती खेल्न थाेले । त्यसकाे माथि चढ्न सफल भएपछि, उनीहरूले त्यसकाे मुख डाेरी बाँधे अनि जनावर निकुञ्जमा लगे ।
हुस्टनकाे बाढीमा फस्टर बाहेक अरूहरूकाे घरमा पनि बाढीले गाेहीकाे सन्त्राल फैलाएकाे छ । गाेहीमात्र हाेइन र अरू खतरनाक जनावरहरू पनि मानिसकाे निवासस्थान बाढीबाट जाेगीन सरण लिर्इरहेकाे घटनाहरू बाहिर अाएकाे छ । कसैकाे बगैंचाहरू पनि यी गाेहीहरू र सर्पाहरू पार्इएककाे छ ।
बाढीकाे समयमा यस्ता जङगली पशुहरू मानिसकाे सभ्यतामा छिर्नु स्वाभाविक हाे । सर्प, बाघ, गाेही, चितुवा, भालु जस्ता पशुहरूकाे नजिक बाढीपिडीतहरू जानुहुँदैन किनभने यी पशुहरूलार्इ मानसहरू मनपर्दैन । त्यसकारण अमेरिका तथा अरू देशहरूमा बाढी, पहिराे, भुइँचालाे र अरू दैविक प्रकाेपकाे समयमा बनजन्तुकाे बारेमा चेतावनीकाे सन्देश सम्म दिइएकाे हुन्छ । तिनीहरूकाे नजिक नगर्इ, सिधै सुरक्षाकर्मीहरूलार्इ सम्पर्क गर्न सुझाव दिइएकाे छ ।
यस्ताे खत्रा नेपालकाे बाढीपिडितले पनि सहनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले सम्पुर्ण बाडीपिडितबाट जाेगीएका दाजुभाइ र दिदिबहिनीहरूले यस्ताे ज्यानलिने जनावहरू फेला पारेमा नजिक नगर्इ नजिककाे सुरक्षाकर्मी अार्मी वा पुलिसलार्इ खबर गरिदिनु राम्राे हुन्छ । त्यसबाहेक त्यस्ता जाेखिमपुर्ण अवस्थामा रहेका जनावरहरूलार्इ मार्नु पनि उचित हुँदैन । मानव पिडितकाे जत्ति जिउने मन हुन्छ त्यतिनै दैविक प्रकाेपमा मानिसकाे घरमा सरन लिने वा बगार्इएका पशुहरूकाे जिवन पनि ठूल्याे मूल्यकाे हुन्छ ।
नेपालको नयााँ कानुन र यसले पाननसक्ने प्रभावहरू
ख्रीष्टमस भविष्यको विश्वव्यापी धार्मिक विदा...
विश्व एड्स दिवसः एड्सकाे खाेप बनाउन किन...
Bidur on नेपालकाे छाेटाे राजनैतिक यात्राकाे पृष्ठभुमी
KhabarDainik Reporter on अाफूलार्इ येशू ख्रीष्ट सम्झने पाँचजनालार्इ गर्याे National Geographic Channel ले रिपाेर्ट
dipak rasaili on अाफूलार्इ येशू ख्रीष्ट सम्झने पाँचजनालार्इ गर्याे National Geographic Channel ले रिपाेर्ट